Nsonaazụ mgbanwe ihu igwe: ka o si emetụta na mba nke | Mmeghari ohuru Green
Portillo nke German | 29/09/2021 15:34 | Gburugburu
Ruo ọtụtụ iri afọ, ihe kpatara ya na nsonaazụ mgbanwe ihu igwe abụrụla ihe gbasara mkpokọta; agbanyeghị, enwere akụkọ ifo gbasara mgbanwe ihu igwe na ọ bụghị onye ọ bụla maara oke mmetụta ya na ụwa. Ma ọ bụ na mgbanwe ihu igwe bụ nsogbu gburugburu ebe obibi kachasị mkpa nke ụmụ mmadụ na -eche ihu na narị afọ a.
Ya mere, anyị ga -arara akụkọ a mara ihe bụ ihe na -ebute na nsonaazụ mgbanwe ihu igwe na mbido ya.
2 Kedu ihe ọ na -emetụta?
3 Ihe si na mgbanwe ihu igwe pụta n'Africa
4 Mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na Asia
5 Ihe ndị si na Latin America pụta
Dabere na Mgbakọ Mba Ndị Dị n'Otu Maka Mgbanwe Ihu Igwe (UNFCCC), mgbanwe ihu igwe bụ mgbanwe ihu igwe nke sitere na ọrụ mmadụ nke na -agbanwe ihe mejupụtara ikuku zuru ụwa ọnụ ma na -abawanye mgbanwe oge niile na -adịkarị na ụwa. mbara ala.
Ala nwere okirikiri nke na -eme site n'oge ruo n'oge, gụnyere mgbanwe ihu igwe. Dịka ọmụmaatụ, ihe dịka afọ 10.000 gara aga, ihu igwe nke ụwa anyị jụrụ oyi karịa ka ọ dị taa, na mmiri kpụkọrọ akpụkọ nwere akụkụ ka ukwuu nke elu ala; mgbanwe mgbanwe ji nwayọọ nwayọọ kwụsị na oge ice ikpeazụ.
Mgbanwe ihu igwe nwere mmetụta na-emebi ihe na mbara ala anyị. Nsonaazụ ya na-abawanye ma ugboro ugboro ma ike n'ihi mmụba nke griin haus mmetụta.
Na akụkọ ntolite nke ụwa enwere mgbanwe mgbanwe ihu igwe dị iche iche, agbanyeghị, nke a nke mmadụ mepụtara bụ nke kachasị njọ. Isi ya bu ahihia ahihia nke anapuputara na ikuku site na ulo oru anyi, oru ugbo, ihe ndi njem, wdg. Otú ọ dị, mgbanwe ihu igwe adịghị emetụta mba nile nhata ebe ọ na -arụ ọrụ dabere na njirimara nke gburugburu ebe obibi na ike njigide ọkụ nke gas ọ bụla griin haus.
Kedu ihe ọ na -emetụta?
Mgbanwe ihu igwe nwere mmetụta dịgasị iche iche na-ebute mmetụta dị iche iche na:
Ihe ndi ozo: Mgbanwe ihu igwe na-awakpo usoro okike, na-ebelata ụdị dị iche iche nke ndụ ma na-esiri ọtụtụ ụdị ike ịdị ndụ. Ọ na-agbanwekwa nchekwa carbon na okirikiri ahụ ma na-ebibi ebe obibi nke ụdị ọ bụla. Ebe ndị e kewara ekewa bụ nnukwu ihe egwu ụmụ anụmanụ na osisi ga-eche ihu na oge ụfọdụ nwere ike ịpụta mkpochapụ nke ụdị a.
Usoro mmadu: N'ihi nsogbu ọ nwere na ikuku, mmiri ozuzo, okpomọkụ, wdg. Mgbanwe ihu igwe na-awakpo sistemụ mmadụ na-akpata enweghị arụmọrụ na ọrụ ugbo. Dịka ọmụmaatụ, oke mmiri na-emebi ọtụtụ ihe ọkụkụ ma ọ bụ enweghị ike ịkọpụta n'ihi oke okpomọkụ, achọrọ ntụgharị mkpụrụ, pests na-abawanye, wdg. N'aka nke ozo, unwu ala na-eme ka enweghi mmiri a drinkingu a forụ maka mmiri, inye obodo, ịsa okporo ámá, ihe ịchọ mma, ụlọ ọrụ, wdg. Na otu ihe kpatara ya, ọ na - emebi mmebi ahụ ike, ọdịdị nke ọrịa ọhụrụ ...
Ngwongwo obodoMgbanwe ihu igwe na-emetụtakwa sistemụ ndị mepere emepe na-eme ka usoro ụgbọ njem ma ọ bụ ụzọ gasị gbanwee, teknụzụ ọhụụ ga-adịwanye mma ma ọ bụ wụnye ya na ụlọ yana n'ozuzu ọ na-emetụta ndụ
Sistemụ akụ na ụba: Ihe ị ga-ekwu banyere usoro akụ na ụba. N'ụzọ doro anya, mgbanwe ihu igwe na-emetụta mmepụta ume, n'ichepụta, ụlọ ọrụ ndị na-eji isi obodo ...
Sistemụ mmekọrịta: Mgbanwe ihu igwe na-emetụtakwa sistemụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-ebute mgbanwe na mbugharị, na-ebute agha na esemokwu, imebi ahazi, wdg.
Ihe si na mgbanwe ihu igwe pụta n'Africa
Afrika bu otu n'ime kọntinenti kachasi ike mgbanwe mgbanwe ihu igwe. Imirikiti Africa ga-enweta mmiri ozuzo pere mpe, naanị mpaghara etiti na ọwụwa anyanwụ ga-enweta mmiri ozuzo dị elu. A na-eme atụmatụ na a ga-enwe mmụba na ala kpọrọ nkụ na ala kpọrọ nkụ n'Africa n'etiti 5% na 8% rue 2080. Ndị mmadụ ga-enwekwa nrụgide mmiri ka ukwuu n'ihi ụkọ mmiri na ụkọ mmiri nke mgbanwe ihu igwe kpatara. Nke a ga-emebi ọrụ ugbo na ịnweta nri ga-esiwanye ike.
N'aka nke ọzọ, ịrị elu nke oke osimiri ga-emetụta nnukwu obodo dị na mpaghara ala dị n'ụsọ oké osimiri, dịka Alexandria, Cairo, Lomé, Cotonou, Lagos na Massawa.
Mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na Asia
Mmetụta ndị ọzọ na-abụghị Africa ga-ahụ na Asia. Iji maa atụ, mmiri kpụkọrọ akpụkọ ga-eme ka idei mmiri na akpụrụ mmiri rịa elu, ọ ga-emetụta akụ mmiri Tibet, India na Bangladesh; Nke a ga - eme ka mbelata nke mmiri na mmiri dị mma, ka glaciers na - ada. N'afọ 2050, ihe karịrị otu ijeri mmadụ nwere ike ịkọ ụkọ mmiri. Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, na ọkachasị nnukwu mpaghara Delta, nọ n’ihe egwu ide mmiri. Ihe dị ka 30% nke coral reef na Eshia ga-apụ n'anya n'ime afọ 30 sochirinụ n'ihi nrụgide dị iche iche na mgbanwe ihu igwe. Mgbanwe nke mmiri ozuzo ga-ebute mmụba nke ọrịa afọ ọsịsa, ọkachasị metụtara idei mmiri na ọkọchị.
O nwekwara ike ime ka anwụnta ịba ụba na-emetụta ọtụtụ ndị Asia.
Ihe ndị si na Latin America pụta
Laghachi azụ nke glaciers na mpaghara a na nsonaazụ mmiri ozuzo na-akpata nwere ike ibute mbelata mmiri dị maka ọrụ ugbo, oriri na ike ike. Ebe ụkọ mmiri dị, arụpụta ihe ọkụkụ ga-ebelata ma nke a ga-ebute nsogbu na nchekwa nchekwa nri.
N'ihi mkpochapu nke ọtụtụ ebe okpomọkụ, Latin America nwere ike ịnwe nnukwu mbibi nke ụdị ndu dị iche iche. Mbelata nke mmiri mmiri na-atụ anya ime ka a eji savannas nke owuwa anyanwu Amazonia jiri nwayọọ nwayọọ were dochie oke ohia nke ebe okpomọkụ. Ihe ndi ozo di n'ime Caribbean bu ahihia coral, nke bu otutu ihe ndi ozo. Searị elu oke osimiri ga-abawanye ihe egwu nke idei mmiri na mpaghara ndị dị ala, ọkachasị na Caribbean.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ihe si na mgbanwe ihu igwe pụta